विपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको ‘प्राध्यापक’ पदवी नक्कली !
विराटनगर । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको आशंका सुरु भएको छ ।
यतिबेला प्रतिष्ठानभित्रको अनियमितता भएको भन्दै त्यस विषयमा छानविन गर्नुपर्ने विषयमा चर्को आवाज उठिरहेको बेला गिरीको शैक्षिक योग्यताको विषयमा थप विवाद सिर्जना भएको हो ।
गिरीले अमेरिकाको कोलोराडो युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्स सेन्टरबाट ‘प्राध्यापक’ पदवी पाएको बताएका थिए । तर, डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको दाबी सो विश्वविद्यालयले अस्वीकार गरेको छ।
प्राध्यापक भएको प्रमाण पेश गर्न बारम्बार चुनौती दिएका आन्दोलनकारी चिकित्सक–विद्यार्थीलाई नटेरेका उपकुलपतिले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कोलोराडो युनिर्भर्सिटी अफ हेल्थ साइन्स सेन्टरबाट आफूले प्राध्यापक पदवी पाएको बताएका थिए।
डा. गिरीको यस्तो दाबीपछि उक्त विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क गरेका आन्दोलनकारीले उनको दाबी विश्वविद्यालयले खण्डन गरेको बताएका छन्। ‘विश्वविद्यालयको अभिलेखमा ज्ञानेन्द्र गिरी नामको प्राध्यापक नभेटिएको’ उक्त विश्वविद्यालयले पठाएको जवाफमा उल्लेख भएको उनीहरूले जनाएका छन्।
नियुक्तिको सुरूआतदेखि नै अनेक विवादमा मुछिँदै आएका उपकुलपति गिरीले आफूलाई ‘प्राध्यापक डाक्टर’का रूपमा चिनाउँदै आएका छन्। काबिल कार्डियोलोजिष्टका रूपमा परिचित डा. गिरीको ‘प्राध्यापक’ पद भने निरन्तर विवादको घेरामा पर्दै आएको छ। १५ महिनाअघि बिपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति बनेर आएदेखि नै उनको सो पदवीबारे अनेक टिप्पणी हुँदै आएको छ। उनले यसबारे मौनता साँध्दै आएका थिए।
डा गिरीले भने सन् १९९७ अर्थात् आजभन्दा २४ वर्षअघि अमेरिकाको कोलोराडो युनिर्भर्सिटी अफ हेल्थ साइन्स सेन्टरले प्रोफेसरको पोस्ट दिएर, अनुसन्धानकर्ता बनाएको दाबी गरेका छन् ।
शुक्रबार, ०१ साउन, २०७८, साँझको ०७:१८ बजे